Kulan looga hadlayo Musiibadii dabka Boosaaso oo ay isugu yimaadeen Ardayda Puntlad ee China+Sawiro – SBC
Kulan looga hadlayo Musiibadii dabka Boosaaso oo ay isugu yimaadeen Ardayda Puntlad ee China+Sawiro
Posted by Webmaster on Diseenbar 9, 2011 Comments
Kulankaan ayaa ugu horeynba waxay ardeyda soomaaliyeed oo u badnaa ardeyda ka timid Puntland , waxay marka u horeysa Tacsi ka soo direen geeridii ku timid Shiikh Dr axmed Xaaji abdiraxmaan , waxayna ardeydu Shiikha uga baryayaan Ilaahay inuu Janadiisa Fardowso ka waraabiyo, Gacantii ka xaqdarneydna Musiibo ku rido , calaamo deg deg ahna ka soo saaro.
Dr. ahmed Xaaji waxuu ka tagay dhamaan umada soomaaliyeed, weyna tabi doonaan, Musiibo alle haku rido kuwii ka danbeeyey dilkii shiikha.
Culimada soomaaliyeed ee shiikha ay rafiiqa wada ahaayeen iyo Qoyskiisaba waxaan alle uga baryeynaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo.
Sidoo kale Arydeydu waxay ka tacsiyeeyeen Musiibadii Gubashada ahayd ee ku dhacdey suuqii weynaa ee Boosaaso, waxayna ardeydu falan qeeyeen sidii arintaasi waxaa looga qaban lahaa, oo marlabaad dadku u heli lahaayeen dhaqaalahoodii ganacsiga ee basbeeley.
Waxaa hoosta laga xariiqey in suuqa boosaaso uu ahaa suuq soomaaliweyn u dhexeeyey isla markaana hantidii soomaalidii halkaas ku ganacsan jirtey uu dhaawac xoogani soo gaarey.
Afartan ardey oo kulanka soo xaadirtey ayaa fikaradahoodii is dhaafsadey , gabagabadii kulankana waxaa laga soo saarey qodobodan hoos ku qoran :-.
1- In ardey kasta uu bixiyo lacag dhan 100 yuan oo u dhiganata , 15 dollar ugu yaraan , qofkii awoodona uu ka badan bixiyo
2- In ardeyda Soomaaliyeed ee kulanka imaan ay ka qayb qaataan maadaama ay tahay arintu mid sadaqo ah
3- In mudo sadex casho gudohood ah lacagtaas lagu soo xareeyo
4- In marka ay soo xareeto lacagtaas loo diro cidii ay u xilsaarto culimadu maadaama nadwadoodii ay ku qabteen masaajidada ,aan soo ajiibney oo aan kajawaabeyno .
5- In lagu booriyo inay si deg deg ah kulama uga qaataan arintaan ardeyda kale ee ku nool caalamka daafihiisa. Oo runtii aad iyo aad nooga tira badan. Hadii ay u kacaana wax badan ay ka qaban karaan arintaas ,, sida arydeyda ku nool wadamada :-
Malaysia , Filibiin, Pakistan , Indonusia , Hindiya , thailand,Suudaan, Masar Yugaandha, Yukreyn , Ruushka , itoobiya iyo Kenya, sidoo kale wadamada Mareykanka , canada , Austureeliya iyo Yurub oo dhan.
6- In ardeyda Gobolada Shiinaha ay iyaguna usoo uruuriyaan lacagtii, sida , ARDEYDA chanchgun, jilin, beijing, hanghou , xian , shenyang iyo dalian
7- In ardeyda Dugsiyada sare ee Wadankeenii gaar ahaan kuwa Puntland ee gaaraya ama dhaafaya Tobanka kun ay min haldoolar ku shubaan account sahalka ee la furey ama la furi dooni.
8- In ardeyda Jaamacadaha Gudaha dhigta ay waxna iska aruuriyaan dadkana wax ka aruuriyaan.
9- In Idaacadaha iyo Tv-yadu ay barnaamijka ka qeyb qaataan iyagoo ka sameynaya, ururinta arigtayaha dadka iyo waliba gudbinta halka ay dadku wax ku soo hagaajin lahaa
10- In Maamulku uu kaalin muuqda ka qaato sidii uu dhaqaalahaas ku soo kabi lahaa.
Intii uu socdey kulanku waxa soo aruurtey lacag dhan 2000 yuwan udhiganta sadex boqol oo doolar
Diseenbar 10, 2011 at 8:56 am
mar kahore waxan salaamayaa dhamaan dadka muslimiinta ah \_
meel kas ta oo ayjoogaan kadaib weymahad san yihiin ardayda walaalaheen ah oo soo qaban qaabiyey barnaa mijkan fiicanw sidookale waxan utacsi yeynayaa sheikh Dr axmad xaji c/raxman allha ha unaxasiirto jana diisana haka waraabiyo,umadii uuka dhintayna samir iyo iimaan allah ha kasiiyi aamiin,isnsha allah dad kiikhasaarada faraha badan aykasoogaadhay gubashadii suuqa Weyn ee magalada Bosasso insha.allah wan kaqayb qaadan doona wabilaahi towfiiq